छिटो र ढिला उठ्नु पनि सापेक्ष कुरा हो । हस्पिटल जान नपरेको दिन ९ बजे पनि छिटो हुन्छ । ल्होसारको विदाको दिन मस्त सुत्ने मौका मिल्यो । त्यो दिन घाम पनि राम्रो लाग्यो । मन पनि रमाइलो, दिन पनि घमाइलो । तर आजको दिन घमाइलो हुने संकेत देख्दिन । बिहान ढिला उठ्छु । घडीले ८ बजाउनै आँटेको रहेछ । पर्दा उघारेर हेर्दा बाहिर त हुस्सु नै हुस्सु हुन्छ। फेरि सुतिरहन मन लाग्छ । तर मलाई सुत्ने सुविधा थिएन । त्यो बेला घरको कोठाभित्रै बसेर काम गरेर जागिर खान मिल्ने साथीहरूको खुब ईर्ष्या लाग्छ । जसोतसो उठेर नित्यकर्म गर्छु । खान पकाउन पनि ढिला भएको थियो । मनमा भने दुविधा भयो - सार्वजनिक बस चढ्ने कि बाइकमा अस्पताल जाने । त्यो हुस्सु देखेर त बसमै जान मन लाग्यो । तर खाना खाएर निस्किदा घडिले ९ बजाइसकेकोले बसमा जान ठिक लागेन । १० बजे त ठ्याक्क पुग्नुपर्यो । समयलाई सम्मान गर्न सकिएन भने समयले आफ्नो सम्मान गर्दैन भन्ने कुरामा मेरो विस्वास छ । त्यसैले बाइक स्टार्ट गरेँ । हातमा पन्जा लगाएँ । ज्याकेट लगाएँ । टोपी लगाएँ । हेल्मेटको सिसामा रहेको शीत पुछेँ । मनमा लाग्दै थियो म कुनै युद्धका लागि तयार हुँदै थिएँ । हुन
धामिले अस्पताल नजानु भन्दा । एउटै समयमा फरक फरक चेतना , फरक फरक आर्थिक अवस्था, फरक पहुच फरक बुझाइका कथाहरु देख्ने मौका सायद सबै चिकित्सकलाई हुन्छ होला । कतै एक पटक हाछ्यु आउँदा डाक्टर खोज्दै दौडिने व्यक्तिहरु छन् भने सोही समयकालमा महिनौंसम्म बिरामी हुँदा पनि अस्पतालको छाया पनि पर्न नहुने मानसिकताका व्यक्ती पनि छन् । बेलाबखतमा दुर्गम जिल्लाबाट सल्लाह गर्न फोन आउने गर्छ मलाई । अन्दाजी पाँच वर्षको बालक निकै सिकिस्त अवस्थामा अस्पतालको एमर्जेन्सी विभागमा आइपुग्छ । उसका बाबुले बिरामी भएको १ महिनामा अस्पताल ल्याउने कष्ट गरेकोमा आस्चर्य मान्ने कि टिठ मान्ने भन्ने दुविधा थियो । आश्चर्य मान्ने हो भने अचेल स्वास्थ्य संस्था नभएको कुनै जिल्ला नगरपालिका, गाउँपालिका छैन होला । स्वास्थ्यका चेतनामूलक चेतावनी र जानकारी नपुगेको कुनै क्षेत्र छैन होला । तर पनि अन्धविश्वासलाई चिर्ने गरी मन्जुश्रीको खड्ग जस्तो कुनै उपाय सुझेनछ अहिलेसम्म । वास्तवमा भन्नुपर्दा चेतनाको विकास शताब्दी पछाडी पर्नुलाई टिठलाग्दो अवस्था नै मान्नुपर्छ । एक महिना पुगेछ बच्चालाई ज्वरो आएको । तर हरेक दिन धामीको शरणमा जाँदै गर्दा आयुक
..................... स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन शाखा बाहिर सेवाग्राहीको लागि भनेर एउटा सोफा राखिएको छ । पहिले पहिले काठको कुर्सी हुन्थ्यो । अचेल भुइँ भित्ता र फर्निचर सबै उन्नत भएछन् । समग्र देशको स्वास्थ्य मात्रै होला उन्नति नभएको ! एउटा उपन्यास हातमा लिएर बसेको छु कुर्ने समय बिताउनलाई । दुई चार पाना पढ्छु । फेरि भित्र हेर्छु । कतै मेरै काम पो गर्न लागेका छन् कि भन्ने आशमा ! तुकविना कुर्नु निकै पीडादायक हुन्छ । त्यो छट्पटी काम गर्न नपाउँदा खट्पटी हुने व्यक्तिले राम्ररी बुझ्न सक्छ । सधैंजस्तो कर्मचारी आउनेजाने क्रम चलिरहन्छ। कसैका हातमा फाइल छन् । कसैका हात रित्तो छ । चिनेको कोहि छैन । सबैका घाँटीमा परिचयपत्र झुन्डिएको छ । त्यसले नाम, वतन र पोस्टको परिचय आधिकारिक दिन्छ । तर व्यवहारको परिचय भने दिँदैन त्यसले । त्यस्तैमा एक जना चिनेजस्तो लाग्ने भर्खर जुँगाको रेखी बसेको दुब्लो जिउडालको युवक मेरो नजिक आइपुग्छ । मेरो छेउमा बस्न इशाराले अनुमति माग्छ । र थचक्क बस्छ । म चिन्न सक्दिन उसलाई । बोल्न सुरु गर्छ " दाइ । मलाई हजुरले पक्कै चिन्नुभएन । म हजुरको छिमेकी कृष्ण अन्कलको
स्नातकोत्तर अध्ययनपस्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समायोजन भएको हुनाले त्यहाँ काम गर्न गएको थिएँ । कोभिडको भ्याक्सिनको कार्यक्रम राखिएको समय परेछ । आफू नयाँ भएको हुनाले त्यहाँको वातावरण बुझ्ने कोशिसमा थिएँ । स्नातकोत्तरको अध्ययन पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्न बाध्य हुनु राज्यको लागि नै जनशक्ति सदुपयोग नहुनु हो । न आएका बिरामीलाई रोगको वास्तविक निदान गर्न सकिन्छ न त भर्ना गरेर उपचार गर्ने संयन्त्र नै हुन्छ । भ्याक्सिन, जुकाको औषधी आदि रोग निवारण गर्ने कार्यका निम्ती भने उपयोगी हुन सक्ला । म कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रले पनि ठुलो भुभागलाई सेवा दिनुपर्ने हुँदा भ्याक्सिन नपुगेर रोइलो हुने अनुमान गरेको थिएँ । तर आशाभन्दा विपरित हुन पुग्यो । टन्टलापुर घाममा वडा वडाका जनताहरु भ्याक्सिनको लागि दर्ता गरेका छन् । लामबद्ध लाइन लगाएर भ्याक्सिनको पालो कुर्दै छन् । एक आपसमा भलाकुसारी गर्दै छन् । भ्याक्सिनका बारेमा सुनेका सत्य असत्य कुराहरु भनिरहेका छन् । " चाइनिस भ्याक्सिन हो । डुप्लिकेत हुन्छ । कसलाई पता छ ! " भ्याक्सिनले प्यारालैसिस गर्छ रे । भ्याक्सिनको काम छ
भैरहवाबाट फर्किँदै थिएँ । घरमा एउटा सानो काम थियो । कोभिडले कन्तविजोग पारेको बेलामा त्यो यात्रा गर्नु पटक्कै मन थिएन । तर जीवन स्थिर त रहँदैन । विभिन्न आयामहरुलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु नै जीवन जिउने कला हो । सामाजिक सन्तुलन , भावानात्मक सन्तुलन र कार्य सन्तुलन सबै मिलाउनु कुशलता हो । त्यसमा सकेसम्म चुक्न नचाहने मलाई कोभिडले चुक्ने मौका दिन खोजेको थियो । पानी सिम सिम परिरहेको थियो । म एयरपोर्टको टर्मिनलमा थिएँ । फ्लाइट ढिला हुने निस्चित थियो । एक घण्टा अगाडि नै पुगेकोले मलाई समय कटाउन निकै मुस्किल हुँदै थियो । फोनमा चार्ज खपत कम गर्नुपर्ने हुनाले गेम्स आदि खेल्न पनि सकिन । एकाएक म बसेको सिट अगाडि एउटी सुन्दर नानी बसिन् । मिलेको जिउडालमा लाम्चो लाम्चो अनुहार भएकी ती नानीको अनुहार कता चिनेजस्तो लाग्यो । कतै पहिले भेटेको जस्तो लाग्यो । कुनै सूक्ष्म आत्मीयता भएको अनुभव भयो । मलाई उनले आकर्षण गरिन् कि उनको उपस्थितिले भन्ने कुरामा दुबिधा थियो । जे होस् उनको उपस्थितिले मनमा संगीत भर्दछ । गित भर्न बाँकी रहेको मीठो संगीत । वरिपरि अरु पनि राम्रा युवतीहरु थिए । उनले नै किन आकर्षित गरिन् त